Location: Mbido » Ịdee » Ọbịa ọbịa » Kedu akwa akwa akwa kacha dị mma?
Mpempe akwa akwa na-adịchaghị mma nwere ike imeziwanye ihi ụra gị, ebe ndị dị obere na-emebi oge ịlana ngwa ngwa. Ihe ndina na akwa adịghị mma. Ndị kwesịrị ekwesị kwesịrị ịdị ogologo oge, dị nro, hypoallergenic, na-eguzogide ọgwụ wrinkles. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya itinye ego otu ugboro n'ime akwa akwa ndị dị elu nke sitere na ihe ndị kwesịrị ekwesị karịa ịzụrụ ndị mediocre mgbe niile.
Kedu ihe anyị na-eji?
Kedu ihe eji eme akwa akwa dị mma? Ha ga-abụrịrị ihe okike, na-adịgide adịgide na nchekwa maka ahụike. A na-eji akwa akwa na hutch eme ihe:
microfiber dị nro na-enweghị atụ na-adịte aka;
dara oké ọnụ ezigbo achara textile;
100% owu eke.
Microfiber okomoko Ibé akwụkwọ tent dị mma maka ndị na-arịa ọrịa allergies dị iche iche ma dịkwa mma n'oge oyi ka ha na-ekpo ọkụ nke ọma ma na-enye ikuku ikuku dị mma. Ihe a na-eguzogide ọgwụ na-emepụta ọgwụ, na-afụ ụfụ, ọ naghị afụ ụfụ, ma na-ejigide ọdịdị dị mma ruo ogologo oge. Ihe ndina bamboo dị gịrịgịrị, dịkwa nro dị ka silk, na-amịkọrọ mmiri nke ọma, na-eku ume, ma mara mma. Ihe akwa akwa nke sitere na ihe a dị mma maka ụmụaka. Ibé akwa akwa na-adị mma maka iji ya eme ihe kwa ụbọchị, na-eme ka akpụkpọ ahụ dị mma ma na-adịgide adịgide.
Flannel akwa akwa
Flannel bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu maka akwa akwa. Uru nke Ibé akwụkwọ:
nke sitere na ihe okike;
hypoallergenic, anaghị ekpokọta uzuzu, ọ dịghịkwa akpata mmeghachi omume nfụkasị ahụ;
na-amịkọrọ mmiri na ọsụsọ nke ọma;
na-eyi na-eguzogide ma ga-adịru ọtụtụ afọ na nlekọta kwesịrị ekwesị;
mma na obi ụtọ na akpụkpọ.
Agbanyeghị, flannel nwere ụfọdụ ọghọm. Ekwesịrị ịsacha ya na obere okpomọkụ iji zere mbelata na nrụrụ nke ákwà ahụ. Flannel na-akpọnwụ ogologo oge. Ọ bụghị dị oke egwu mgbe ịsachara ya, ma ọ ka mma ịhapụ ihe ndina ahụ na-ekpuchighị ya ruo mgbe mpempe akwụkwọ ahụ kpọrọ nkụ. Wepu ntụpọ na akwa akwa flannel tupu ịsa igwe; ma ọ bụghị ya, ha nwere ike ịdịgide ruo mgbe ebighị ebi.
Atụmatụ izugbe maka nlekọta ihe ndina
Ị kwesịrị ịsacha akwa akwa gị mgbe niile tupu ị na-eji ya maka oge mbụ; nke a ga-eme ka ọ dị ọcha, dozie agba, ma mee ka ákwà ahụ dị nro. Tụgharịa ihe mkpuchi duvet na akpa ohiri isi n'ime ime ka ọ dị ọcha n'akụkụ uzuzu. Tinye mpempe akwụkwọ ahụ n'ime mkpuchi duvet ma mechie zipa ma ọ bụ bọtịnụ. Na-asa akwụkwọ ndị nwere agba iche na ndị ọcha. Lelee okpomọkụ nke ịsacha ahụ. Iwu ndị a dị mfe ga-enyere gị aka ịgbatị ndụ nke akwa akwa gị. Linen na Hutch na-achọ gị nrọ obi ụtọ na akwa akwa dị nro ma dị mma.
Ọzọ na: Bamboo
Ndụmọdụ maka ịkwadebe maka ezumike na-enweghị nchekasị